Ikhaya » Iindaba zeShishini lokuhlangana
Udidi-Iindaba zeShishini lokuhlangana
Iindaba zeMice malunga neentlanganiso, Inkuthazo kunye neMisitho. Iingqungquthela, iindibano zocweyo, iintlanganiso zeZiko. Iindawo zokuhlangana, iindawo zaziwa njengeMICE yokuhamba kunye nomzi mveliso wokhenketho.
Cofa apha Ukujonga iintlanganiso.travel, ibhlog yethu entsha yentlanganiso kunye nomzi mveliso wenkuthazo.
Iindaba zaseUzbekistan Zokwaphula Iindaba
Amalungu avotele i-Uzbekistan ukuba ibambe iNdibano Jikelele ye-UNWTO yama-25, ecwangciselwe ukubanjwa ngo-2023...
Igqiza elikhokelwe nguMphathiswa weMicimbi yezaNgaphandle noKhenketho, uMnu. Sylvestre Radegonde, lizimase...
1 2 3 ... 63 Okulandelayo